आँखा कमजोर भएको कारणले मलाई मेडिकल अनफिट गराउन सक्छ ?
Mon, Aug 10, 2020 | 12:09:55 NST
सुदिप क्षेत्री, रामेछाप
प्रश्न : म वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहन्छु । मेरो आँखा कमजोर छ । म चश्मा लगाउछु । यहि कारणले मलाई मेडिकल अनफिट गराउन सक्छ ? म वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउँछु कि पाउँदिन ?
उत्तर : सुरेश पौडेल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – तपाईंले आफ्नो चश्माको पावर कति छ भन्ने कुरा लेख्नु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो । देश अनुसार यस सम्बन्धी नियम फरक छन् । तर पनि ६/६-६/९ सम्मको आँखाको पावरलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि ठिक मानिन्छ ।